I-Global Textile Imishini Market ikhula ngezinga CAGR ka 8,28% ngesikhathi 2018-2022.
I-Global Textile Imishini Market 2018-2022, abakulungiselweyo esekelwe esikhathini esingamahora anga-market analysis anokufaka kusuka umkhakha izazi. Lo mbiko ihlanganisa landscape emakethe futhi ekukhuleni kwayo amathemba phezu eminyakeni ezayo. Lo mbiko kuhlanganisa ingxoxo abadayisi ukhiye ezisebenza kule makethe.
Ngokwalo mbiko, omunye umshayeli ezinomthelela lokhu emakethe nesibalo esikhulayo izindwangu okungezona nokwelukiweyo. izindwangu nonwoven kuthiwa izakhi imikhiqizo indwangu ukuthi zihlobene Imicu yotshani okuyisisekelo esifushane noma Imicu yotshani okuqhubekayo eside, ngokusebenzisa amakhemikhali noma kunenze nisondelane mechanical amasu, futhi akekho nokwelukiweyo noma wathungela. izindwangu okungezona nokwelukiweyo ekhiqizwa yi-high-speed kanye zamanani aphansi izinqubo.
Omunye mkhuba ezithinta lokhu emakethe ezishintshayo e yendwangu imishini. Automation kudlala indima ebalulekile ekuthuthukiseni izinga nenani lazo nokuncintisana yendwangu yokukhiqiza. Okuzenzakalelayo yendwangu imishini ngesivinini ukukhiqizwa yendwangu futhi kwandisa ukugeleza izinga lendwangu, nokuzokwenza yokukhiqiza mafutha. Automation udlala indima ebalulekile fibre yokukhiqiza, ntambo yokukhiqiza, nokweluka, ukudaya, nezinqubo yokuqedela.
Ngaphezu kwalokho, lo mbiko ubonisa ukuthi enye inselele ezithinta kule makethe yilona eliphezulu amanani ukotini ezithinta ukuphotha umkhakha. Ukotini ingenye izinto eziyinhloko zokusetshenziswa for the umkhakha ukuphotha. Ukwanda amanani ukotini kuthinta basembonini yendwangu kokuphelele.
isikhathi Iposi: Oct-24-2018